သူ့ကိုမှရစ်မိနေပါတယ်ဆိုတဲ့ရက်တွေရောက်နေပြီလား? | OnDoctor
အမျိုးသမီးလေးတွေ တစ်လတစ်ခါရာသီလာခါနီးလိုလိုမှာဆီးစပ်ကိုက်တာ၊ ခါးကိုက်တာ၊ ရင်သားနာတာတွေ ဖြစ်ရုံသာမက ဘာအကြောင်းအရင်းမှ မရှိဘဲ စိတ်ကယောက်ကယက်ဖြစ်ပြီး စိတ်အတက်အကျမြန်တာ၊ငိုချင်သလိုလို ရယ်ချင်သလိုလို ဖြစ်တာမျိုးတွေ ကြုံဖူးကြမှာပါ။ အဲ့ရက်ရောက် လာပြီဆို ဒေါသတွေအလိုလိုထွက်ပြီး ဘေးကရှိသမျှလူတွေကိုလည်း ရစ်မိနေတာမျိုးလုပ်မိတတ်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒါဘာလို့ဖြစ်ရတာလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းအရင်းကို ဆက်ကြည့်ရအောင်။
အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ ရာသီလာခါနီးမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့စိတ်ပြောင်းလဲမှု နှင့် ခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တွေကို ရာသီအကြိုလက္ခဏာများ တနည်းအားဖြင့် premenstrual syndrome ( PMS ) လို့ခေါ်ပါတယ်။ PMS ဟာများသောအားဖြင့် ရာသီလာခါနီး တစ်ပတ်အလိုလောက်မှာ စတင်ဖြစ်တာကို တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ရာသီအကြိုလက္ခဏာတွေဖြစ်ပွါးတဲ့ပုံစံကလည်း တစ်လနဲ့တစ်လလည်းမတူတတ်သလို တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်လည်းမတူတတ်ပါဘူး။ တချို့က ဘယ်လိုမှမနေလိုက်ဘဲ မသိသာတာမျိုးတွေ၊ တစ်ချို့ကျလည်း အိပ်ရာထဲကနေမထနိုင်လောက်အောင် ဆိုးရွားတာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ရာသီလာတာပြီးသွားရင်တော့ သူ့အလိုလို ဘာမှမလုပ်ရဘဲပျောက်သွားတတ်ပါတယ်။
ဘာ့ကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကို တိတိကျကျပြဌာန်းထားတာမျိုးမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဖြစ်နိုင်ချေအများဆုံး အချက်ကတော့ ရာသီစက်ဝန်းမှာ ပါဝင်တဲ့ဟော်မုန်းတွေအပြောင်းအလဲကြောင့်မို့လို့ပါ။
အမျိုးသမီးတွေမှာ ရာသီစက်ဝန်းရဲ့အလယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မျိုးပွားဖို့အတွက် မမျိုးဥကြွေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကို သားဥအိမ်ကနေဆောင်ရွက်ပါတယ်။ သားဥအိမ်ကနေ မမျိုးဥကြွေပြီးတဲ့နောက်မှာ အမျိုးသမီးဟာ လိင်ဆက်ဆံမှုမရှိလို့သန္ဓေသားလေးမဖြစ်သွားဘူးဆိုရင်ရာသီလာဖို့အတွက်လုပ်ဆောင်ကြပြီး ရာသီစက်ဝန်းမှာပါဝင်တဲ့ အီစထရိုဂျင်နဲ့ ပရိုဂျက်စထရုန်း ဟော်မုန်း၂မျိုးဟာ သွေးထဲမှာ ပမာဏနည်းသွားပါတယ်။ အဲ့ဒီ့ ဟော်မုန်း၂မျိုး အတက်အကျဖြစ်တာဟာပျော်တဲ့စိတ်ကိုဖြစ်စေတဲ့ ဒါမှမဟုတ် အိပ်ချိန်စားချိန်ကိုမှန်စေတဲ့ဆီရိုတိုနင်ဆိုတဲ့ဟော်မုန်း အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ အီစထရိုဂျင်နဲ့ ပရိုဂျက်စထရုန်းပမာဏ နည်းသွားလျှင် ဆီရိုတိုနင်ဟော်မုန်းကိုပါ နည်းစေပါတယ်။ ဆီရိုတိုနင်ဟော်မုန်း နည်းသွားလျှင် ဝမ်းနည်းလာတာ၊ စိတ်ဆတ်လာတာ၊အိပ်ပဲအိပ်ချင်နေတာ ဒါမှမဟုတ် အိပ်မပျော်တာ၊ အားနည်းလာတာ၊ ငိုချင်တာ၊ စိတ်အတက်အကျမြန်တာမျိုးတွေ၊ အစားအသောက်မမှန်တာမျိုး၊ အာရုံစူးစိုက်ရခက်နေတာမျိုး၊ တစ်ခုခုစားချင်နေတာမျိုးတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာ တချို့ဆို အလုပ်မှာအဆင်မပြေတာ၊ မိမိရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတ မဖြစ်တာမျိုးတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။
ရာသီလာခါနီးကိုယ်ခန္ဓာပြောင်းလဲမှုအားဖြင့် ရင်သားနာကျင်တာ၊ ဝက်ခြံအထွက်များတာ၊ ခေါင်းကိုက်တာ၊ ဗိုက်အောင့်တာ၊ ဆီးစပ်ကိုက်တာ၊ ခါးကိုက်တာ၊ မောပန်းလွယ်လာတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုအနေနဲ့ကတော့ အထက်မှာဖော်ပြခဲ့သလို စိတ်အတက်အကျမြန်ခြင်း၊ ငိုလွယ်စိတ်ဆိုးလွယ်ခြင်း၊ အားငယ်တတ်ခြင်း၊ အိပ်ပဲအိပ်ချင်နေခြင်း၊ အိပ်မပျော်ခြင်း၊ အစားအသောက်ပုံမမှန်ခြင်း တို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ရာသီအကြိုလက္ခဏာတွေ ဖြစ်လာရင် ဘယ်လိုဆောင်ရွက်သင့်လဲ?
အဓိကကတော့ ကိုယ့်စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းလဲမှုကို သိအောင်ကြိုးစားပါ။
မိမိရဲ့ရာသီစက်ဝန်းပုံစံကိုသေချာမှတ်ထားပါ။ တစ်လနဲ့တစ်လ ဘယ်လိုပြောင်းလဲမှုမျိုးဖြစ်တယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ရာသီအကြိုလက္ခဏာတွေက ဘယ်လမှာပိုဆိုးတယ် ဘယ်လမှာမသိသာဘူး အဲ့ဒါတွေကိုစောင့်ကြည့်ပေးပါ။ ကိုယ်လက်ကိုက်ခဲတာအရမ်းဆိုးရင် ဆရာဝန်တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ပြပါ။ လတိုင်းနီးပါး စိတ်ရောကိုယ်ရောပင်ပန်းတာအရမ်းဆိုးတယ်ဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာသားဖွားမီးယပ်ဆရာဝန်နဲ့ စစ်ဆေးကုသမှုခံယူသင့်ပါတယ်။
သက်စောင့်ဓါတ်တွေပါဝင်တဲ့အားဆေးတွေ သောက်ပေးပါ။ သုတေသနလေ့လာချက်များအရ ဗီတာမင် ခေါ် သက်စောင့်ဓါတ်တွေပါဝင်တဲ့အားဆေးကို ရာသီမလာခင် တစ်ပတ်လောက်အလိုမှာ ကြိုသောက်ပေးမယ်ဆိုရင် ရာသီအကြိုလက္ခဏာတွေသာမက ရာသီလာစဉ်ကိုက်ခဲတာမျိုးကိုလည်း သက်သာစေပါတယ်။ ကယ်လ်ဆီယမ်ကြွယ်ဝတဲ့အစားအသောက်တွေစားပေးပါ။ အသားငါးမျှတအောင် စားပါ။ ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုလုပ်တဲ့အခါ ကျန်းမာရေးကောင်းရုံသာမက စိတ်ကိုပါပျော်ရွှင်စေတဲ့အတွက် တစ်နေ့ကိုနာရီဝက်ခန့် နှင့် တစ်ပတ်ကို၅ရက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးပါ။ အိပ်ချိန်ပုံမှန်ရှိပါစေ။ အိပ်မပျော်လို့ အိပ်ရာထဲမှာ ဖုန်းကြည့်တာမျိုး၊ တီဗီကြည့်တာမျိုးက မျက်စိပိုကြောင်စေပါတယ်။
အချိုစားတာလျှော့ပေးပါ။ စိတ်ညစ်ရင် အချိုများများစားလို့ပြောကြပေမယ့် ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ အချိုဓါတ်များလာတဲ့အခါ စိတ်ညစ်တာကိုပိုဆိုးစေပါတယ်။ ပုံမှန်တော်သင့်ရုံပဲစားပေးရင်လုံလောက်ပါတယ်။ အသီးအနှံ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များများစားပေးလို့ရပါတယ်။
စိတ်ဖိစီးမှုနည်းအောင် ယောဂ ကစားတာ၊ တရားထိုင်တာ၊ အားကစားတစ်ခုခုလုပ်တာမျိုးတွေက ကိုယ်ရောစိတ်ရောကျန်းမာစေပါတယ်။ စိတ်တည်ငြိမ်မှုလည်းရရှိစေပါတယ်။
Dr.Khaing ( ref ; Healthline.com )